Chinese inground mwenje, underwarter uye akitekicha mwenje mwenje mugadziri - Eurborn
Spot mwenje PL023
Spot mwenje PL026
Vhidhiyo Yekuisa Mu Ground LED Mwenje
Yakakwira mhando uye yakakwira mwero.
Eurborn ndiye chete mugadziri weChinese akazvitsaurira kutsvagisa, kusimudzira uye kugadzirwa kwesimbi isina chinhu kunze kwepasi pevhu uye kwemwenje yemvura. Kusiyana nevamwe vatengesi vanoita marudzi mazhinji emarambi, isu tinofanirwa kugara takatarisa nekuda kwenzvimbo dzakaomarara dzinopikisa chigadzirwa chedu. Chigadzirwa chedu chinofanira kukwanisa kutora aya mamiriro uye kuita zvakakwana zvisinei nedambudziko. Saka isu tinofanirwa kuita zvese zvatinogona padanho rega uye nhanho inishuwarenzi chigadzirwa chedu chichaita kugutsikana kwako
Stair mwenje ine chete 12mm ukobvu -GL108
Nedzakakwana uye nesainzi yemhando yepamusoro manejimendi maitiro, mhando yepamusoro uye zvakanakisa zvitendero, takahwina mukurumbira wakanaka. Panguva imwecheteyo, Eurborn anoomerera kuhunyanzvi hwekuenderera, uye osvitsa ichi chiedza kubva kuEurborn yazvino thinnest lam ...
4 Mhando dzeStair Mwenje
1. Kana zvisiri zvekunakidzwa, danda rekureruka harina kana moyo Kutaura chokwadi, mwenje wemasitepisi ungangodaro wakafanana nemwenje wemugwagwa. Ndiyo mwenje wekutanga munhoroondo kushandiswa sechiitiko chekufunga dhizaini, nekuti masitepisi husiku anofanira kunge aine mwenje, o ...
Unogona Taura Nesu Pano